Xisbi ka tirsan Norway oo soo jeediyay in Ajaanibta laga joojiyo lacagta Hoolgabka Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaXisbi ka tirsan Norway oo soo jeediyay in Ajaanibta laga joojiyo lacagta Hoolgabka
Xisbi ka tirsan Norway oo soo jeediyay in Ajaanibta laga joojiyo lacagta Hoolgabka
January 30, 2021 Wararka Maanta Somaliska 0
Photo/Dan P. Neegaard
Xisbiyada FRP iyo SV waxay si wada jir ah u soo bandhigeen soo jeedin ah in la kordhiyo lacagta hawlgabka ee ugu yar. Waxay rabaan ilaa heerka EU-da ee saboolnimada. Laakiin isla waqtigaas, xisbiga FRP wuxuu rabaa in meesha laga saaro nidaamka hawlgabka ee soo galootiga aan halkaan ku noolayn waqti dheer oo ku filan si loo helo ugu yaraan hawlgab buuxa.
– Haddii aad timaadid Norway oo aadan ku noolayn halkan waqti kugu filan ama aadan shaqeyn muddo dheer oo aad ku qaadan karto lacagta hawlgabka, markaa waxaa ku habboon kaalmada dhaqaale ee bulshada.
Sidaasi waxaa yidhi Frps Erlend Wiborg. oo ah gudoomiyaha Gudiga Shaqada iyo Arimaha Bulshada.
Si aad u hesho hawlgab buuxa oo ugu yaraan ah, waa inaad Norway ku noolayd 40 sano. Muhaajiriinta iyo qaxootiga halkaan u imid iyaga oo waaweyn sidoo kale ma helayaan ilaa ay ka gaarayaan 67. Waxay taa badalkeeda heli karaan gunno dheeri ah.